बजेटबारे मुख खोल्दै नेकपा महासचिव विप्लवले के भने ? विस्तृतमा हेर्नुहोस् — Sanchar Kendra
बजेटबारे मुख खोल्दै नेकपा महासचिव विप्लवले के भने ? विस्तृतमा हेर्नुहोस्
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिवले केपी नेतृत्वको सरकारले मंगलबार घोषणा गरेको बजेट शब्दजालले भरिएको भाषण भनेका छन् ।
बजेटले नेपाली जनता र देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने भन्दा सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने नीतिमा आधारित रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार १३ खर्ब १५ अर्ब बराबरको आ.व. ०७५/०७६ को पूर्ण बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए भने जेठ १० राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
महासचिव विप्लवले प्रस्तुत बजेट पुरानै दलाल संसदीय व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने र दलाल–भ्रष्टाचारीलाई पोस्ने किसिमको रहेको कडा टिप्पणी गरेका छन् । ईरातो खबरमा प्रकाशित विप्लवको प्रतिक्रिया तथा टिप्पणीअनुसार बजेट घोषणापछि दलाल संसदीय सरकारको सट्टा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताले मात्र देश र जनताका समस्या समाधान गर्न सक्ने पुष्टि भएको विचार व्यक्त गरेका छन् ।
बजेटमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिद, बेपत्ता योद्धा र घाइते योद्धाहरूका बारेमा कुनै कार्यक्रम नल्याइएको भन्दै महासचिव विप्लवले आपत्ति जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, “जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिद, बेपत्ता योद्धा र घाइते योद्धाहरूका बारेमा कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छैन । २०६५ सालदेखि लगातार बजेट विनियोजन गरिएको सहिद प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरूमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । यसले गर्दा प्रचण्डका मन्त्रीहरूको कुनै कार्यक्रम नपरेको देखिएको छ ।